सेक्सी वी नेक अगाडि काँध पट्टि एक टुक्रा महिला बिकिनी सेट
सेक्सी वी नेक अगाडि काँध पट्टिहरुमा एक टुक्रा महिला बिकिनी सेट
सामग्री संरचना: यस एउटा टुक्रा ट्या tank्किनी स्विमसूटको कपडा 82२% पॉलिएस्टर र १%% स्पानडेक्सले बनेको छ। स्ट्रेचिई कपडा धेरै टिकाऊ र आरामदायक हुन्छ।
सेक्सी वी घाँटी फ्रन्ट डिजाइन र सेक्सी क्रिसको विस्तारसँगै काँध पट्टिहरू, ब्याक ब्याक विवरण, ट्याini्किनी स्विमसूटलाई शीर्ष आकर्षक बनाउनुहोस्।
बिकिनी तलको पछाडि दुईपट्टि पट्टि हुन्छ जुन अगाडि पछाडि जडान हुन्छ,काँधमा डबल स्ट्र्याप पूरक। यो तपाइँ एक राम्रो दृश्य हुन राम्रो र आकर्षक लाग्नेछ।
समुद्रको किनार, पोखरी, पानी पार्टी र उष्णकटिबंधीय बिदाका लागि उपयुक्त महिलाका लागि यो पेट नियन्त्रण स्विमवेयर। चलो टेनि season मौसम अँगालो!
हामीसँग तपाईंसँग बिभिन्न अमेरिकी आकारहरू उपलब्ध छन्, एस (०-२), एम (4--6), एल (युएस 8-१०), एक्सएल (१२-१-14), २ एक्सएल (१ 16-१-18)। कृपया आफ्नै लागि सही आकार छनौट गर्नुहोस्। तिम्रो दिन शुभ रहोस्!
%%% पॉलिएस्टर +%% स्पानडेक्स
Odमोडेलले एक सानो लुगा लगाएको छ। धेरै फिट भएको रनहरू! यदि तपाईलाई छाडा शैली मनपर्‍यो भने तपाई ठूलो आकार छनौट गर्न सक्नुहुनेछ।
- ब्याकलेस एक टुक्रा स्विमसूटले गहिरो v-नेकलाइनलाई समायोज्य स्पेगेटी स्ट्र्यापहरू, हटाउन योग्य कपहरू र खुल्ला पछाडि जोडिएको फिचर गर्दछ। यो महिलाहरूको लागि नुहाउने सूटमा फिट र अनुभवीको लागि सामग्रीमा केही तन्काइएको छ!
A फेसनदार पशु प्रिन्ट बान्की र ठोस रंगको विशेषता प्रदान गर्दै, यो यस्तो शैली हुनै पर्छ! र तपाईं अनन्त V-घाँटी सिल्हूट र एक टुक्रा शैलीसँग गलत हुन सक्नुहुन्न!
Ust केवल तपाईंको मनपर्ने sunnies र एक टोपी जोड्नुहोस्! वा तपाई कभर अप, कार्डिगन, किमोनो र सनग्लासको साथ स्टाइल गर्न सक्नुहुनेछ ग्रीष्म beachतुको बिचको परिदृश्यको लागि यो सुन्दर लुक यत्तिको सजिलो छ सबै गर्मी लामो लाई प्रेम गर्न!
Beach समुद्र किनार, पोखरी साइड, छुट्टी, रिसोर्ट, क्रुज र धेरै अवसरहरूको लागि स्विमसुट महिलाहरू उत्तम छन्। सेक्सी सेक्सी डी नेक स्विमसूटले तपाईंको कर्भ देखाउँदछ। यो त्यस्तो समुद्री तट भाग्नेमा हुनुपर्छ।
अघिल्लो: पूर्ण रूपमा महिला दुई टुक्रा कटआउट स्विमीसूट टमी कन्ट्रोल मोनोकिनी
अर्को: महीन उच्च कटौती पैर चीकी सीट कभरेज एक टुक्रा नुहाउने सूट महिलाको लागि
नरम कपास कुनै राइड अप लेग ब्यान्ड्स इच फ्री लिट ...
स्ट्रेचि फैब्रिक पूर्ण कभरेज गैर हेर्नुहोस्-थ्रोभ ...
लेडीज जिम योगा लगाउने सुविधाजनक।